လမျးမှာ ဆိုငျကယျရပျစကားပွောနတေဲ့လငျမယားကို နခေ့ငျးကွောငျတောငျ ရုပျရှငျဆနျဆနျ ဓါပွတိုကျမှုဖွဈ - MM Live News
လမျးမှာ ဆိုငျကယျရပျစကားပွောနတေဲ့လငျမယားကို နခေ့ငျးကွောငျတောငျ ရုပျရှငျဆနျဆနျ ဓါပွတိုကျမှုဖွဈ
November 6, 2019 MM Live
ပဲခူးမြို့၊ မဇင်းဆည်တွင် ရွှေထည်ပစ္စည်းများနှင့် ဖုန်းတို့အား ခြောက်လှန့်တောင်းယူသွားသူတို့ကို ဖမ်းဆီး ရမိပြီး ကျန်ကျူးလွန်ခဲ့သည့် အမှု ထပ်မံစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ကြောင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်းတွေ့ရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ၂-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့ ညနေ (၄)နာရီအချိန်ခန့် ကိုကိုနိုင် (၂၁)နှစ်နှင့် ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူ မသရဖီ (၁၆)နှစ်တို့သည် ပဲခူးမြို့ မဇင်းဆည်သို့ သွားရောက်ပြီး ဆည်ရေတံခါးအကျော် သစ်သားတံခါးနား အရောက်တွင် ဆိုင်ကယ်အား ရပ်တန့်ကာ စကားပြောနေစဉ် နှာခေါင်းများ စည်းထားသည့် အမျိုးသား (၃) ဦးသည် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး ….
၎င်းတို့အနီးတွင် ဆိုင်ကယ်အား ရပ်တန့်ကာ အရိုးအသွား (၁)ပေ ခွဲခန့်ရှိ ဓါးကိုယ်စီ ကိုင်ဆောင်၍ ၎င်းတို့ (၃)ဦးအနက် (၂)ဦးမှ ကိုကိုနိုင်အား ဓါးဖြင့် ခုတ်ကာ ၎င်းတို့ (၂)ဦးထံမှ ရွှေနားကပ် (၂)ခု၊ ရွှေ ဆွဲကြိုး(၁)ကုံး၊ MI NOTE4လက်ကိုင်ဖုန်း(၁)လုံးတို့အား ယူဆောင် သွားပြီး …..
ကိုကိုနိုင်တွင် ယာလက်ဖျံပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ (၁)ချက်၊ ဝဲလက်ကောက်ဝတ် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပဲခူးမြို့၊အမှတ်(၂)နယ်မြေရဲစခန်း (ပ)၁၆၃၈/၂၀၁၉၊ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၉၄/ ၁၁၄ (လုယက်မှု ကျူးလွန်ရာတွင် နာကျင်စေမှု / အားပေးကူညီမှု)ဖြင့် အမှုဖွင့်ဆောင် ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
အမှုမှ တရားခံများအား အမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏ ညွှန်ကြားမှု၊ ပဲခူးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့၏ ကြီးကြပ်မှုတို့ဖြင့် ပဲခူးမြို့ အမှတ် (၂)နယ်မြေရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ရဲအုပ် ရဲထွဋ်ကိုနှင့် နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် ဒုရဲအုပ် ထက်ဝေကျော် တို့ဦးစီး၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ …..
မဇင်းဆည် အနီးတဝိုက်တွင် မသင်္ကာ လူငယ် (၃)ဦး၏ သွားလာမှုအား ၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ လူငယ် (၃)ဦးမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ အတည်ပြုခဲ့ရာ အထက်ပါ အမှုမှ တရားခံများ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြချက်အရသိရှိခဲ့ရပါသည် ။
အဆိုပါ လူငယ် (၃)ဦး၏ နေရပ်လိပ်စာအား စုံစမ်းရာ ပဲခူးမြို့၊ ဥသာမြို့သစ်၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၂)ရှိ တည်းခိုခန်းတွင် ညစောင့် ဆောင်ရွက်သူ အာကာ (ခ) ကျော်သက်ဖြိုး (၁၇)နှစ်၊ အထက်ဇိုင်းဂနိုင်းကြီးကျေးရွာနေသူဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့ရသဖြင့် စောင့်ဆိုင်း ဖမ်းဆီးရာ အာကာ (ခ)ကျော်သက်ဖြိုးမှာ အဆိုပါ တည်းခိုခန်းသို့ ၎င်းနေ့ ည (၇)နာရီအချိန်ခန့် ပြန်လည် ရောက်ရှိ လာသဖြင့် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။
၎င်းအား စစ်မေးရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ၎င်းနှင့်အတူ ကိုစိုင်း (ခ)စိုင်းဇာနည်ကျော် (၂၄)နှစ်၊ နန်းတော်ရာ ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့နေသူနှင့် ရန်လင်းအောင် တို့ ပါဝင်ကြောင်း စစ်ဆေးသိရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရသည်။ကျန်တရားခံများအား ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ပဲခူးမြို့မရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ သက်သေရာအိမ်မှူးများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ….
ကိုစိုင်း (ခ)စိုင်းဇာနည်ကျော် အား ပဲခူးမြို့၊ စံတော်တွင်းလမ်းနှင့် အင်းဝင် (၉)လမ်းထိပ်ရှိ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။ ပြစ်မှု ကျူးလွန်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် ဓါး (၁)ချောင်း၊ သံနံကျတ်ကူ (၁)ချောင်း၊ လုယူသွားခဲ့သည့် နားကပ် (၁)စုံတို့အား ၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး ကျန်တရားခံ (၁)ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိရေး နှင့် ကျန်သက်သေခံပစ္စည်းများအား သိမ်းဆည်းနိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းဆက်လက်ဖော်ပြထားသည် ။
အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းမိ တရားခံ အာကာ (ခ) ကျော်သက်ဖြိုး နှင့် ကိုစိုင်း (ခ)စိုင်းဇာနည်ကျော် တို့ (၂)ဦးအား ကျန်အမှုများ ကျူးလွန်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ အသေးစိတ် ထပ်မံ စစ်မေးရာ ၎င်းတို့ (၂)ဦးသည် ၁-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် နေ့လည် (၂)နာရီအချိန်ခန့်တွင် မဇင်းဆည်သွားသည့်လမ်း ဘုန်းကြီးကျောင်း အနီး၌ သက်လွင် (၂၇)နှစ်နှင့် မအေးချမ်းမေ (၂၄)နှစ်တို့ (၂)ဦးအနက် ….
သက်လွင် အား အရိုး/အသွား (၈) လက်မခန့်ရှိ ဓါးဖြင့် ထောက်ပြီး မအေးချမ်းမေ အား (၆)လက်မခန့်ရှိ ဓါးဖြင့် ခြောက်လှန့်ပြီး ၎င်းတို့ (၂)ဦး ထံမှ ရွှေဆွဲကြိုး (၁)ကုံး၊ ရွှေလက်စွပ်(၁)ကွင်း၊ Mi Note5ဖုန်း (၁)လုံး၊ ပိုက်ဆံအိတ် အနက်ရောင် တန်ဖိုးငွေ (၅၀၀၀)ကျပ်ခန့်အား ခြောက်လှန့် ယူဆောင်ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးသိရှိရသဖြင့် ၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးမြို့ အမှတ်(၂)နယ်မြေရဲစခန်း(ပ)၁၆၄၁/၂၀၁၉၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၈၆/၁၁၄ (ခြောက် လှန့် တောင်းယူမှု/ အားပေးကူညီမှု)ဖြင့် အမှုထပ်မံဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ထားရှိကြောင်းနှင့် ကျန်အမှုများ ပေါ်ပေါက်နိုင်ရေး အသေးစိတ် ထပ်မံ စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖော်ပြချက်အရသိရှိရပါသည် ။
သတင်း ဓာတ်ပုံ – ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ #AlinnMyay(အလင်းမြေ)
ပဲခူးမွို့၊ မဇငျးဆညျတှငျ ရှထေညျပစ်စညျးမြားနှငျ့ ဖုနျးတို့အား ခွောကျလှနျ့တောငျးယူသှားသူတို့ကို ဖမျးဆီး ရမိပွီး ကနျြကြူးလှနျခဲ့သညျ့ အမှု ထပျမံစဈဆေးပျေါပေါကျကွောငျး ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီးရဲတပျဖှဲ့မှ သတငျးထုတျပွနျထားကွောငျးတှရေ့သညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ၂-၁၁-၂၀၁၉ ရကျနေ့ ညနေ (၄)နာရီအခြိနျခနျ့ ကိုကိုနိုငျ (၂၁)နှဈနှငျ့ ၎င်းငျး၏ဇနီးဖွဈသူ မသရဖီ (၁၆)နှဈတို့သညျ ပဲခူးမွို့ မဇငျးဆညျသို့ သှားရောကျပွီး ဆညျရတေံခါးအကြျော သဈသားတံခါးနား အရောကျတှငျ ဆိုငျကယျအား ရပျတနျ့ကာ စကားပွောနစေဉျ နှာခေါငျးမြား စညျးထားသညျ့ အမြိုးသား (၃) ဦးသညျ ဆိုငျကယျဖွငျ့ ရောကျရှိလာပွီး ….
၎င်းငျးတို့အနီးတှငျ ဆိုငျကယျအား ရပျတနျ့ကာ အရိုးအသှား (၁)ပေ ခှဲခနျ့ရှိ ဓါးကိုယျစီ ကိုငျဆောငျ၍ ၎င်းငျးတို့ (၃)ဦးအနကျ (၂)ဦးမှ ကိုကိုနိုငျအား ဓါးဖွငျ့ ခုတျကာ ၎င်းငျးတို့ (၂)ဦးထံမှ ရှနေားကပျ (၂)ခု၊ ရှေ ဆှဲကွိုး(၁)ကုံး၊ MI NOTE4လကျကိုငျဖုနျး(၁)လုံးတို့အား ယူဆောငျ သှားပွီး …..
ကိုကိုနိုငျတှငျ ယာလကျဖြံပွတျရှ ဒဏျရာ (၁)ခကျြ၊ ဝဲလကျကောကျဝတျ ထိုးသှငျးဒဏျရာ ရရှိခဲ့သညျ့ ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ ပဲခူးမွို့၊အမှတျ(၂)နယျမွရေဲစခနျး (ပ)၁၆၃၈/၂၀၁၉၊ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၉၄/ ၁၁၄ (လုယကျမှု ကြူးလှနျရာတှငျ နာကငျြစမှေု / အားပေးကူညီမှု)ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ဆောငျ ရှကျခဲ့ကွောငျး သိရပါသညျ။
အမှုမှ တရားခံမြားအား အမွနျဆုံးဖမျးဆီးရမိရေးအတှကျ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီးရဲတပျဖှဲ့မှူး၏ ညှနျကွားမှု၊ ပဲခူးမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူးတို့၏ ကွီးကွပျမှုတို့ဖွငျ့ ပဲခူးမွို့ အမှတျ (၂)နယျမွရေဲစခနျးမှ စခနျးမှူး ရဲအုပျ ရဲထှဋျကိုနှငျ့ နယျထိနျးခေါငျးဆောငျ ဒုရဲအုပျ ထကျဝကြေျော တို့ဦးစီး၍ ဆောငျရှကျခဲ့ရာ …..
မဇငျးဆညျ အနီးတဝိုကျတှငျ မသင်ျကာ လူငယျ (၃)ဦး၏ သှားလာမှုအား ၄-၁၁-၂၀၁၉ ရကျနတှေ့ငျ မှတျတမျး ဓါတျပုံ ရိုကျကူးနိုငျခဲ့ပွီး အဆိုပါ လူငယျ (၃)ဦးမှာ ပွဈမှုကြူးလှနျရာတှငျ ပါဝငျခွငျး ရှိ/မရှိ အတညျပွုခဲ့ရာ အထကျပါ အမှုမှ တရားခံမြား ဖွဈကွောငျး ဖျောပွခကျြအရသိရှိခဲ့ရပါသညျ ။
အဆိုပါ လူငယျ (၃)ဦး၏ နရေပျလိပျစာအား စုံစမျးရာ ပဲခူးမွို့၊ ဥသာမွို့သဈ၊ ရပျကှကျကွီး (၂)ရှိ တညျးခိုခနျးတှငျ ညစောငျ့ ဆောငျရှကျသူ အာကာ (ခ) ကြျောသကျဖွိုး (၁၇)နှဈ၊ အထကျဇိုငျးဂနိုငျးကွီးကြေးရှာနသေူဖွဈကွောငျး သိရှိခဲ့ရသဖွငျ့ စောငျ့ဆိုငျး ဖမျးဆီးရာ အာကာ (ခ)ကြျောသကျဖွိုးမှာ အဆိုပါ တညျးခိုခနျးသို့ ၎င်းငျးနေ့ ည (၇)နာရီအခြိနျခနျ့ ပွနျလညျ ရောကျရှိ လာသဖွငျ့ ဖမျးဆီးရမိခဲ့ပါသညျ။
၎င်းငျးအား စဈမေးရာ ပွဈမှုကြူးလှနျရာတှငျ ၎င်းငျးနှငျ့အတူ ကိုစိုငျး (ခ)စိုငျးဇာနညျကြျော (၂၄)နှဈ၊ နနျးတျောရာ ရပျကှကျ၊ ပဲခူးမွို့နသေူနှငျ့ ရနျလငျးအောငျ တို့ ပါဝငျကွောငျး စဈဆေးသိရှိခဲ့ကွောငျးလညျးသိရသညျ။ကနျြတရားခံမြားအား ဖမျးဆီးရမိရေးအတှကျ ပဲခူးမွို့မရဲစခနျးမှ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ သကျသရောအိမျမှူးမြားနှငျ့ ပူးပေါငျး၍ ဆကျလကျဆောငျရှကျခဲ့ရာ ….
ကိုစိုငျး (ခ)စိုငျးဇာနညျကြျော အား ပဲခူးမွို့၊ စံတျောတှငျးလမျးနှငျ့ အငျးဝငျ (၉)လမျးထိပျရှိ ဆံပငျညှပျဆိုငျတှငျ ဖမျးဆီးရမိခဲ့ပါသညျ။ ပွဈမှု ကြူးလှနျရာတှငျ အသုံးပွုခဲ့သညျ့ ဓါး (၁)ခြောငျး၊ သံနံကတျြကူ (၁)ခြောငျး၊ လုယူသှားခဲ့သညျ့ နားကပျ (၁)စုံတို့အား ၅-၁၁-၂၀၁၉ ရကျနတှေ့ငျ သိမျးဆညျးခဲ့ပွီး ကနျြတရားခံ (၁)ဦးအား ဖမျးဆီးရမိရေး နှငျ့ ကနျြသကျသခေံပစ်စညျးမြားအား သိမျးဆညျးနိုငျရေး ဆကျလကျဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျးဆကျလကျဖျောပွထားသညျ ။
အမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ ဖမျးမိ တရားခံ အာကာ (ခ) ကြျောသကျဖွိုး နှငျ့ ကိုစိုငျး (ခ)စိုငျးဇာနညျကြျော တို့ (၂)ဦးအား ကနျြအမှုမြား ကြူးလှနျထားခွငျး ရှိ/မရှိ အသေးစိတျ ထပျမံ စဈမေးရာ ၎င်းငျးတို့ (၂)ဦးသညျ ၁-၁၁-၂၀၁၉ ရကျနတှေ့ငျ နလေ့ညျ (၂)နာရီအခြိနျခနျ့တှငျ မဇငျးဆညျသှားသညျ့လမျး ဘုနျးကွီးကြောငျး အနီး၌ သကျလှငျ (၂၇)နှဈနှငျ့ မအေးခမျြးမေ (၂၄)နှဈတို့ (၂)ဦးအနကျ ….
သကျလှငျ အား အရိုး/အသှား (၈) လကျမခနျ့ရှိ ဓါးဖွငျ့ ထောကျပွီး မအေးခမျြးမေ အား (၆)လကျမခနျ့ရှိ ဓါးဖွငျ့ ခွောကျလှနျ့ပွီး ၎င်းငျးတို့ (၂)ဦး ထံမှ ရှဆှေဲကွိုး (၁)ကုံး၊ ရှလေကျစှပျ(၁)ကှငျး၊ Mi Note5ဖုနျး (၁)လုံး၊ ပိုကျဆံအိတျ အနကျရောငျ တနျဖိုးငှေ (၅၀၀၀)ကပျြခနျ့အား ခွောကျလှနျ့ ယူဆောငျခဲ့ကွောငျး စဈဆေးသိရှိရသဖွငျ့ ၅-၁၁-၂၀၁၉ ရကျနတှေ့ငျ ပဲခူးမွို့ အမှတျ(၂)နယျမွရေဲစခနျး(ပ)၁၆၄၁/၂၀၁၉၊ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၈၆/၁၁၄ (ခွောကျ လှနျ့ တောငျးယူမှု/ အားပေးကူညီမှု)ဖွငျ့ အမှုထပျမံဖှငျ့လှဈ ဆောငျရှကျထားရှိကွောငျးနှငျ့ ကနျြအမှုမြား ပျေါပေါကျနိုငျရေး အသေးစိတျ ထပျမံ စဈဆေးလကျြရှိကွောငျး ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီးရဲတပျဖှဲ့မှ ဖျောပွခကျြအရသိရှိရပါသညျ ။
သတငျး ဓာတျပုံ – ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီးရဲတပျဖှဲ့ #AlinnMyay(အလငျးမွေ)
ကွာ သုံးကွာ၊ ချာ သုံးချာ၊ ပါ သုံးပါဆိုတဲ့ အကြောင်း ဗဟုသုတလေးပါ…
မန်းစည်ပင်ရဲ့ သမိုင်းတွင်ကျန်ခဲ့မယ့် အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခု….
January 19, 2019 MM Live
မြင်သူတိုင်း ၀မ်းသာမဆုံးဖြစ်စေတဲ့ အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု ကံထူးရှင်မိသားစုလေး